चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्ध देश जस्तै स्वतन्त्र - Pardafas
मङ्सिर १६, २०७७
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक भएकाले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र नै हुने भन्दै उनले चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हेको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गरेका हुन्।
चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ्हे आइतबार नेपालको एकदिने भ्रमणमा आएर फर्किएका छन् ।
रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कारमा डा. भट्टराईले छिमेकीहरुसँग नेपालको सम्बन्ध जहिलेपनि स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोड्ने गल्ति गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ । अर्को स्वतन्त्र मुलुकसितको सम्बन्ध स्वतन्त्र नै हुन्छ । त्यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोड्ने कुरा अगाडी बढायौँ भने हामी फस्छौँ । त्यो गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन । नेपाल भारतको सम्बन्ध दुई मुलुकको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो । नेपाल र चीनको सम्बन्ध पनि दुई मुलुकको सम्बन्ध हो । अन्य जुनसुकै मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन्छ ।’
डा. भट्टराईले नेपाली सेनालाई वार्षिक रुपमा चीनले दिँदै आएको सहयोगको निरन्तरता बाहेक अन्य कुनै गतिविधि नभएको दाबी गरे ।
उनले भारतसँग सीमा विवाद लगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय जोइन्ट कमिसनको बैठक डिसेम्बर महिनाभित्र नै सम्पन्न हुने पनि बताए ।
उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित कमिटीहरुमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने समेत बताए ।
पूर्व रक्षामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भिमसेनदास प्रधानले चीन र भारत दुबै देशलाईसँगै लिएर नेपालले आफ्नो हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कुनै पनि देशतिर नढल्केर कुनै पनि देशको अहित हुने काम नगरेर आफ्नो उन्नति गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले चीन र भारत दुबै देशलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नेपालले युद्धको अवस्था ल्याउन दिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने , ‘हाम्रो सेनाको प्रयोग र सबभन्दा बढि सदुपयोग भनेको नै युएन पिसकिपिङमा मात्रै हो, नेपालको सीमामा सेनाले त्यति चासो दिएको छैन् । त्यहाँ प्यारामिलिट्री फोर्स सशस्त्र प्रहरी बस्छ । सेना डाईरेक्ट जानुपनि हुँदैन् । युद्धै भएको अवस्थामा मात्रै जाने हो । नेपालले युद्धको अवस्था ल्याउन दिनुपनि हुँदैन् । सुगौली सन्धिमा हामीले धेरै गुमायौं नि । हाम्रो रणनीति भनेको नै भारत र चीनलाई विश्वासमा लिएर नै नेपालको हितमा सम्बन्ध उपयोग गर्ने हो । नेपाललाई एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन् ।’
नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दिक्षितले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको हितका लागि सोचेर अगाडी बढ्न आग्रह गरे।
दुई ठूला विकसित देशहरुको बीचमा रहेको नेपालले दुबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडी बढ्न सके मात्रै प्रगति गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित नहुन उनको आग्रह थियो ।
उनले भने, ‘नेपालीहरुले अलिकति बुद्धि लगाउन सक्यौँ भने । आफ्नो स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थ छोडेर यी दुई मुलुकसँग फाइदा लिन सक्यौँ भने केही सिक्याैं भने हामी धेरै माथि जान सक्छौँ । दलका नेताहरुले आपसको हित हेरेर चीन र भारतलाई लडाएर, झगडा गराएर आफ्नो पार्टीलाई मात्रै फाइदा हुनेगरी अगाडी बढे नेपालको फल प्राप्त गर्दैन । त्यो फल प्राप्त गर्न सकिएन भने हम्रो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुने छ ।’
उनीहरुले आफ्नो देशको हितलाई हेरेर चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् दिक्षितले थपे ।
उखु किसानले फेरि गरे आन्दोलनको घोषणा
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन नियमनकाे तयारीमा सरकार
पाकिस्तानस्थित चिनियाँ परियोजनामा भएको बम विष्फोटमा १२ को मृत्यु
यान्छीलाई फिर्ता बोलाएर नेपालमा नयाँ राजदूत पठाउँदै चीन